Barcelona oo go’aamisay qiimaha ay kaga iibineyso Jasper Cillessen kooxaha xiiseenaya – Gool FM
Xiddigaha Man United oo isku wada taagay Ookiyaal/Indho-gashi kaddib markii ay…..
Karim Benzema oo si xun ula dhaqmay Barcelona oo Gurigiisa ku soo booqatay…..!!!!
“Sarri si ku tala gal ah ayuu u Bur-Burinayaa Chelsea.”.-
Jose Mourinho oo MUUQAAL/VIDEO aan laga fileyn u soo diray Arsene Wenger….(Maxay tahay SABABTA?)..+SAWIRRO
“Markii ugu horeysay ee aan arkay Mbappé waxaan mooday in kubada cagta ay yeelatay Pele cusub”
“Waan niyad jabnay” – César Azpilicueta
MAN UNITED iyo MAN CITY oo midkood loo saadaalinayo FA Cup…(Bal Ogoow lacagaha ay qaadan doonto Kooxda ku guuleysata)
Henderson oo sharad ku galay in kooxdiisa Liverpool ay ku guuleysan karto Premier League iyo Champions League
Tababare Solskjær oo ka warbixiyay hal arin uu ka codsaday ciyaartoydiisa khadka dhexe, kulankii ay guusha ka gaareen kooxda Chelsea
Sarri oo ka hadlay guuldaradii niyad jabka ahayd ay kala kulmeen kooxda Manchester United
Barcelona oo go’aamisay qiimaha ay kaga iibineyso Jasper Cillessen kooxaha xiiseenaya
(Barcelona) 09 Juunyo 2018. Barcelona ayaan qarka u saaraneyn inay iibiso goolhayaha reer Holand Jasper Cillessen, gaar ahaan hadii dalab weyn aan la diidi Karin ku hesho.
Wargeyska “Mundo Deportivo” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in kooxda reer Catalonia aysan dooneynin inay iska iibiso Jasper Cillessen, balse wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in hadii ay ku helesyo qiimo macquul ah aan la diidi Karin ay iska iibineyso.
Jasper Cillessen ayaa heshiiskiisa haatan uu ku joogo kooxda Barcelona lagu kansali karaa aduun dhan 60 million euros, hadii ay jirto koox daneeneysa inay la wareegto saxiixa laacibkan.
Goolhaayahan xulka qaranka Holand ayaa ku yiid kooxda Barcelona aduun dhan 13 million euros xagaagii 2016, wuxuuna kaga soo dhaqaaqay kooxda Ajax, inkastoo uusan ciyaarin kulamo badan, waxaana doonaya kooxo badan ee Yurub ah
Liverpool, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Arsenal iyo Napoli ayaa dhamaantood wada doonaya inay helaan saxiixa Jasper Cillessen.
Kingsley Coman oo fariin cad u diray Bayern Munich.. "Waxaan ahaa mid waalan"
Vicente del Bosque oo ka hadlay dhibaatada Cristiano Ronaldo ee kooxda Real Madrid
Karim Benzema oo si XUN ula Dhaqmay Barcelona oo GURIGIISA ku booqatay…..(Ka bogo sida ay wax u dheceen) https://t.co/BRtSSINCQb
“Sarri si ku tala gal ah ayuu u Bur-Burinayaa Chelsea.”.- https://t.co/NzdXTFHs9U
Barnaamijka Muuqaalka Maanta Gool Tv Maria Aadan Herleen https://t.co/ZlsgfniEGA